⭐ Tenga chaiye webhusaiti traffic vanhu ᐅ Hwemhando yewebhu vashanyi inoshandura ⇪
Online Trafiki Imba
Tenga yakanyanya kutariswa
RUDZIVA ITAFUZVI IZVO
Tinogona kutumira traffic kune yako:
SEZVEDU VANHU VANYANYA
YEMAHARA ZVINOKOSHA ZVESE
Tenga chairo vashanyi webhusaiti
Isu tinoziva kuti zvinogona kuvhiringidza sei kuwana yakawanda traffic kune yako saiti. Uye kunyangwe kana iwe uchikwanisa kuwana kubatirana, chii chinhanho kana ivo vasina kugadzirira kushandura kuva chaiyo, vanofarira webhusaiti vashanyi?
Nguva nenguva tinoona vanhu vachishandisa mari yavo yese kushambadzira uye kuwana vashoma traffic kumawebhusaiti avo - Mushandirapamwe paFacebook / Instagram anogona kukuwanira zvimwe zvaunoda asi hazvireve hazvo kushandura kune webhusaiti traffic / Clicks. Uye zvakangoita sekuti tariro yavo uye shuviro dzekuve sechitanhatu kana manomwe muridzi webhizinesi anoenda muutsi.
Iwe unombonzwa here kuti iwe unogona kunge uchitsika nzira imwechete?
Kunyangwe iwe uri dropshipper, anga aparadza zviuru zvemadhora mumaAds kana mudiki bhizinesi muridzi achitora yako bhizimusi online kwekutanga; tinzwei kunze. Tinogona kubatsira!
Fomula yezvakawanda inotungamira uye kutengesa haina kuomesesa sezvingafungwa nevamwe. Zvaunoda ndizvo zvimwe Niche Targeted Traic. Iwe unoda vashanyi vakagadzirira kusvika mukati mavo marata, kuburitsa makadhi echikwereti, uye utenge izvo zvauri kutengesa.
Uye nzira yakanakisa yekutora premium traffic ndeyekusiya basa kwatiri.
HAPANA ZVIMWE ZVOKUTI KUFUNGA NEZVINOGONESA ZVINOGONESA DZEMAKARA
HAPANA ZVIMWE ZVIMWE KUVIMBIRA MARI PAKATI PAKUTI FIERY YEMAHARA
HAPASI KUTENGA KUTENGA IMWE "CHOKWADI" CHINOKUDZIDZISA KUTI UNOGONA SEI MAMIRIYONI
HAPASI KUTENGA KUTORA GAMBA PAMWE VAMWE "INFLUENCER"
Saka Ingoita Sei Iyo Niche Yedu Yakatemerwa Webhusaiti Traffic Basa?
Kana usati wambonzwa nezvazvo niche traffic kutungamira zvekare, imo nekuti hakuna anonzi-guru haangambokuudze nezvazvo - nzira yacho ingango kukwikwidza nekwavo kwakakosha traffic traffic uye kukanganisa kukanganisa kubva kumakosi avanenge vatengesa.
Nekudaro, niche traffic re-mwelekeo inzira inonyatsoshanda yekuwana yakakodzera online traffic iyo inonyanya kukodzera kune rako bhizinesi. Izvi zvinoreva kuti vashanyi vewebhusaiti iwe vaunogashira vanhu vatove vanofarira bhizinesi rako. Semuenzaniso, mutengi ari kutengesa mota accessories anowana traffic inotumidzwa kubva kunzvimbo dzemotokari.
Isu tinoshandisa nzira dzakasiyana siyana senge pop-unders, muchina kudzidza algorithms, pamwe nehurongwa hwekutapa midhiya kubva padura hombe rekushambadzira network. Uyezve, tinobata yakakura ad yekuongororwa yedomain uye niches.
Nekuwedzera muE-Commerce uye Kudonhedza mumakore achangopfuura, tinoziva kuti masevhisi edu anofanirwa kuenderana zvinoenderana nezvinodiwa nemusika. Ndosaka timu yedu yenyanzvi ichigara ichiyedza uye nekuvandudza masisitimu edu kuburikidza nekuedzwa kwehupenyu mune yedu R&D kuyedza. Zvakaguma nei? Iyo yepamusoro-soro inoshandura yakananga traffic inogoneka! Tichishandisa yazvino AI (Artificially Intelligent) tekinoroji, Isu tinodzoreredza traffic iyo inonyanya kukoshesa niche yako (Semuenzaniso, mumwe munhu anotengesa zvigadzirwa zvemagetsi anozowana traffic kubva kune tech mawebhusaiti / mablog.
All traffic are 100% yevanhu uye yakanyanya kutarisirwa uye saka inowedzera yako webhusaiti kuoneka uye mikana yekutengesa.
Yedu yakanyatsosarudzwa huwandu hwemawebhusaiti anoshanda kutungamira vashanyi vewebhu kubva kune yakasarudzika IPs kune yako nyika yaunoda uye niche. Isu tinofukidza nyika dzakasiyana siyana mune USA, UK, Europe, Singapowo, Asia, ne Africa. Nezve pamusoro pe 320 niche misika, isu tine shuwa kuti iwe unowana yakakwira mhando inotungamirwa traffic, nekudaro kukurudzira mukurumbira webhusaiti yako, uye kuwedzera mikana isingaperi yekutengesa.
Nesu nedivi rako, webhusaiti yako yakasungirwa kuti uwane kuwedzera kuoneka.
Heano maitiro ekutanga:
1. Zadza FOMU
2. ITAI TISANGANE ZVAKAWANDA DZAKO
3. SITITI RUDO uye RELAX ASI TINOGADZA ZVESE ZVAKAITWA KUTI Uite
Fomu rekuraira raunozadza pa Checkout rinotipa zvese zvese zvatinoda kuti tizadzise chikumbiro chako. Zvinongotora chete 30 masekondi kuti uzvipedze.
Tisati tatanga maitiro edu, isu tinoita chokwadi chekutarisa chikumbiro chako mukuteerana neyedu kuchengetedza matanho. Ziva chokwadi, isu hatikubvunze iwe chero mapassword - kuvanzika kwako kwakanyanya kukosha kwatiri!
Munguva yekusimbisa maitiro, isu tinosimbisa iro rechokwadi rebhizinesi rako - mushure mezvose, isu tamhanya zviri pamutemo mashoma uye saka tinotarisira kuti vatengi vedu kuve pamusoro bhodhi zvakare! Izvi zvinoreva kuti webhusaiti yako inofanirwa kuve inobvumirwa nemutemo mune zvakasikwa. Yako webhusaiti haigone kuve neipi spyware, adware, mavhairasi kana Trojan honye pairi. Kana iwe ukaisa chirevo cheaya marudzi emawebhusaiti, isu tinovhara yako traffic traffic pasi uye haugamuchire muripo.
Chero bedzi iwe uri kambani iri pamutemo inoenderana nemitemo yedu uye mamiriro, chikumbiro chako chichaitwa mukati memazuva matatu kusvika mana!
Uye voilà! Paunenge watumira chikumbiro, hapana chimwezve chinhu chaungaita. Iwe unotanga kuona traffic kune yako webhusaiti mukati me3 kusvika 4 mazuva ekukumbira kwako. Uye yega yega yega hits iwe yaunowana inovimbiswa kuva mushanyi chaiye wevanhu!
Niche Online Traffic inobata pamusoro pemakumi maviri emakumi emakore ruzivo
Isu tinoshanda needu makuru Global Kushambadzira Networks. Iyo kambani inoshanda ine ine yakakura network yevashambadziri vepasiripo kushambadzira iyo inopa chaiyo vanhu webhu traffic, uye inoshandira kubudirira kwevatengi vavo. Chikwata chedu chinoshandisa matarenda epamusoro, kusanganisira vanhu vakashanda nemazita akakura mu tech uye kushambadzira.
Isu tiri nhamba yekutanga yeruzivo rwechokwadi rweInternet uye vashanyi vanonangwa. Isu tinodada nebasa redu rekuona kukosha kwepamusoro uye kukosha kweyechokwadi webhu traffic yevanhu.
Ndo izvo zvinotiita isu PREFERRED traffic source yekudonha, E-Commerce uye chero bhizinesi ripi neripi rine online inowanikwa. Parizvino, tapa traffic kune anopfuura zviuru makumi mashanu ezvitoro zvepamhepo, pamapuratifomu akasiyanasiyana, kusanganisira Shopify, Clickbank, Etsy, Ebay neAmazon. Usanetseka - isu takakufukidza!
Kutenga traffic kubva kuNiche Online Traffic hakungorevi kuwedzera kwakasimba mubhizinesi rako rivepo online, asi zvakare yepamusoro notch vatengi.
Paunosarudza Niche Online Traffic, iwe unowana yedu yakasarudzika nzira kuve yako niche yesarudzo.
Maindasitiri Akafukidzwa (haana kuganhurirwa):
Trafiki kune yako Blog / Zvemukati Saiti
Zvivakwa / Real Estate
Kufambidzana & Ukama
Mavheti / Kupukutira
Ita Money Online
Dhijitari / Anosimudzira Mauto
Mamwe akawanda mazhinji eB2B uye B2C mabhizinesi
Siya yako webhu traffic kune maInstitute
Facebook Ads uye Influencer Campaigns kuwana zvakawandisa Zvinodhura?
Kurwara kwekungova ne "Likes" uye Hapana Turrafiki inogadzirwa?
Isu tinonzwisisa. Uye isu tine izvo zvaunoda.
Isu tinoyedza ese emigwagwa yedu, Isu maAI system tinodzidza uye nekugadziridza 24 / 7 saka kuwirirana uye kunaka kwetraffic kunongoita zviri nani kupfuura kwechipiri.
KUKOSHA KUKOSHA KUTI BUDA
Vashanyi vakatumirwa kwauri vanhu vari kutofarira Niche yako, saka ndiyo mukana wepamusoro wekushandurwa.
Isu tashandira indasitiri kweanopfuura 2 makumi emakore. Isingaverengeki yeB2B uye B2C mabhizinesi akakura achionekwa nesu mumakore ese aya.
Mitengo inoronga kutenga webhusaiti traffic
200 Mazuva Ekushanya
100% Chaiwo Vanoshanya
Chaiyo IP Kero
200 Vanoshanya Zuva Nezuva kwemwedzi mitanhatu KANA 6 Vashanyi Vemazuva ese kwemwedzi mumwe
200 Vanoshanya Zuva Nezuva kwemwedzi mitanhatu KANA 12 Vashanyi Vemazuva ese kwemwedzi mumwe
Simudza Keyword Chinzvimbo
Wedzera Kutsvaga Kwemotokari
Kucheka Edge Nzira
ZVINOTAURWA NEVADZIDZISI VEDU NEZvedu
SETH - cONTENT SITE MURIDZI
"Kwayedza traffic yepa new brand site uye ini ndinogona kutaura kuti ndizvozvo, vanhu chaivo.Vanoti ndichaedza zvekare."
LAURA - SHOPIFY MUDZIMAI WESITORE
Takamira kushandisa zvinodhura FB ads mushure mekushandisa vakomana ava. Seenzaniso yakanaka!
Maka - MARKETING MANAGER pakambani ye saas
NicheOnlineTraffic inopa basa hombe nerubatsiro uye rwakaringana rutsigiro. Vanoedza nepavanogona napo kukupa iwe traffic yaunoda, traffic yavo yakachengeteka zvachose uye ndeyechokwadi. Chaizvoizvo zvinoshamisa, iri kupaza bhizimusi rangu !.
Copyright © 2020 Niche Online traffic. Kodzero dzese dzakachengetedzwa.